खेलकुद – Sudur Sanchar
आइतबार , माघ ९, २०७८
Jan152022 by Bibek PoudelNo Comments
कर्णालीबाट आफ्नै खर्चमा बंगलादेश पुगेका खेलाडीहरुले जिते २ स्वर्ण पदक !
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा २ स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन् । बंगलादेश गोजुरियो कराँते ‘दो’ संघको आयोजनामा गत डिसेम्बर २६ देखि २९ सम्म चलेको वि.जी. अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण प्रतियोगितामा सहभागी कर्णालीका खेलाडीले २ स्वर्णसहित २ कास्य पदक जितेका हुन् । प्रतियोगितामा सहभागी बनेका सुर्खेतका प्रकाश खड्काले एकल कातामा स्वर्ण र ७५ के.जी. कुमितेमा कास्य पदक जितेका हुन् । त्यस्तै, दैलेखका हिक्मत रोका मगरले ६५ के.जी. कुमितेमा १ स्वर्ण र सुर्खेतका सन्दिप महतले ७० के.जी. कुमितेमा कास्य पदक जितेका हुन् । जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतकाअनुसार खेलाडीहरु आफ्नै निजी खर्चमा बंगलादेश पुगेका थिए । जिल्ला गोजुरियो कराँते संघ सुर्खेतले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पदक जित्ने खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला खेल
Dec272021 by Bibek PoudelNo Comments
हार्दिक बधाई नेपालले बङ्गलादेशमा माल्दिभ्सलाई हरायो
काठमाडौं । नेपालको पुरुष टोलीले बंगलादेशमा जारी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा दोस्रो जित निकालेको छ । ढाकामा आइतबार माल्दिभ्सलाई ३-० को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले दोस्रो जित निकालेको हो ।नेपालले माल्दिभ्समाथि २७-२५, २५-१९ र २५-२३ को सेटमा जित निकालेको हो । खेलमा नेपालका मान बहादुर श्रेष्ठ प्लेयर अफ दि म्याच चुनिए ।यस जितसँगै नेपालले ४ खेलमा ६ अंक जोडेको छ । नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम रहेको छ । माल्दिभ्स अंक विहीन रहेको छ । यस अघि पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३-० को सेटमा पराजित भएको थियो । दोस्रो खेलमा उज्वेकिस्तानलाई ३-१ को सेटमा हराएको नेपालले तेस्रो खेलमा श्रीलंकासँग ३-१ को सेटमा पराजित भएको थियो । महिलातर्फ नेपाल फाइनल पुगिसकेको छ ।आइतबार उज्वेकिस्तानलाई ३-० को सोझो सेटमा हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो । साविक विजेता सम
Jun32021 by BasudevNo Comments
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, खेलकुद, बिज्ञान प्रबिधि, भिडियो, मनोरंजन, राशिफल, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
नरिवलको तेल खानु स्वास्थ्यका हिसाबले निकै राम्रो मानिन्छ । तर एउटा नयाँ खोजले नरिवलको तेल खानेहरुको मनमा शंका पैदा गरेको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा टीएच चेन स्कूल अफ पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक केरिन मिशेल्सले खानामा प्रयोग गर्न नरिवलको तेल सबैभन्दा खराब तेलमध्येको एक भएको दाबी गरेका छन् । ‘कोकोनट ओइल एण्ड न्यूट्रिशनल एरर’ मा एक लेक्चर दिँदै हार्वर्डका प्राध्यापक मिशेल्सले नरिवलको तेललाई पूर्ण रुपमा विषालु बताएका छन् । उनले भने, ‘यो तेलमा सेचुरेटेड फ्याटको मात्रा अत्यधिक हुन्छ जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो ।’ मिशेल्सका अनुसार सेचुरेटेड फ्याटको अत्यधिक मात्राले हाम्रो धमनीमा रगतको प्रवाह रोक्न सक्छ । यसले मुटु सम्बन्धि रोगको खतरा निम्त्याउँछ । सेचुरेटेड फ्याट अत्यधिकः केही महिनाअघि डाक्टर माइकल मोस्लेले बीबीसीका लागि नरिवल तेलमाथि एक अनुसन्धान गरेका थिए । माइकल मोस्ले साइन
वास्तुशास्त्र अनुसार परिवारका सदस्य यदि बिरामी र तनावमा भइरहन्छन् भने यसको कारण घरको मुख्यद्वार पनि हुनसक्छ । मुख्यद्वारसँग जोडिएका वास्तु दोषका कारण घरका सदस्य शारिरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा विचलित हुन्छन् । वास्तुशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थमा घरको मुख्यद्वारसँग सम्बन्धित विशेष जानकारी दिइएको हुन्छ जसबारे ध्यान दिँदा तनाव, रोग र अनावश्यक खर्चबाट बचाउन सकिन्छ । यसका साथै घरमा शान्ती कायम रहन्छ । वास्तु शास्त्रमा यस्ता पाँच दोषबारे बताइएको छ जसका कारण घरमा गरिबी भित्रिन्छ । १. घरको मुख्य ढोका काठको हुनुपर्छ र बाहिरतर्फ खोलिनुपर्छ । भित्रतिर खोलिने ढोकाका कारण घरका मूलीले तनाव र विभिन्न रोगको सामना गर्नुपर्छ । धातुको ढोका राख्दा धोका पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यद्यपी, फेंग सूईले भने घरको ढोका भित्रतिर नै खोलिएको राम्रो बताउँछ । फेंग सूईका अनुसार घरको ढोका भित्रतिर खोलिनुको अर्थ आमन्त्रण
कहिलेकाँही कुनै व्यक्ति वा स्थानको नाम जति सम्झिन खोजेपछि यादै आउँदैन । यस्तो धेरैजनालाई भएको हुनुपर्छ । उमेर बढेसँगै मानिसहरुको स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै जाने बताइन्छ । यस्तो साँच्चै हुन्छ पनि तर दिमागलाई तन्दरुस्त राख्न सकिन्छ । यदि तपाईं आफ्नो दिमागी क्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ उल्लेखित तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ । १. व्यायामः व्यायाम गर्दा दिमागको कोशिकाबीच आपसी सम्पर्क निकै राम्रो हुन्छ र नयाँ कोसिकाको निर्माण पनि हुन्छ । कार्डियो व्यायाम गर्दा तपाईं धेरै अक्सिजन लिनुहुन्छ र यदि तपाईंले यो व्यायाम खुल्ला मैदानमा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले यसमार्फत् भिटामिन डी पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ । यसो गर्दा दिमाग ताजा र तन्दरुस्त हुन्छ । २. केही काम गरिरहँदा याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस्ः यदि तपाईंलाई कुनै प्रेजेन्टेशन वा भाषण दिनु छ भने तयारी स्वरुप आफ्नो नोट्सलाई हिँड्दै वा डान्स
काठमाडौँ, गाउँगाउँमा खुलेका सहकारीदखि धार्मिक सङ्घ, संस्था र सहरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूले समेत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेका छन् । तर यसरी सञ्चालन भएका एम्बुलेन्स सेवाप्रति आम जनसमुदाय ढुक्क हुन भने सकेका छैनन् । ‘भनेको बेला र आवाश्यक परेको बेला एम्बुलेन्स पाउनै मुस्किल छ । फोन उठ्दैन, उठिहाले पनि एम्बुलेन्स बिग्रेको भन्ने जवाफ पाइन्छ’, धेरैको गुनासो यस्तै सुनिन्छ । उपभोक्ताले खोजेका बेला नपाउने मात्रै होइन, धेरैजसो एम्बुलेन्स त तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालनसमेत भएका छैनन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७३ ले एम्बुलेन्सलाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरेर एम्बुलेन्सको श्रेणीअनुसार एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा पनि तोकिएको छ । तर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूमा तोकिएका सुविधाहरू अत्यन्त न्यून मात्रै पाइने गरेका छन् । के–के हुनुपर्छ ‘क’ वर्ग
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीमा रहेका माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुको बिहिवार भिन्दै बैठक बस्यो । नेकपाले भदौ तेस्रो साता स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा नेपाल समूहको किन बैठक बस्यो त ? नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘जिल्लादेखि प्रदेश र जनबर्गीय संगठनहरुको एकताका लागि गठित कार्यदलले फरक–फरक मापदण्ड अपनाएर नेतृत्वका लागि सिफारिस गरेको पाइयो । एउटै मापदण्डमा होस् भन्ने दबाब दिनुपर्ने देखियो ।’ तल्ला कमिटीको एकता दुई पार्टीका कमिटीबीचको समायोजन भएको र यसमा एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए । नेकपाको जबस, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रियाका लागि गठित कार्यदलले नेतृत्वको विषय टुंग्याउन नसकेपछि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले थप गृहकार्य थालेका बेला नेपाल समूहको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । एक
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा
चितवन — प्रदेश नं ३ को ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भरतपुरमा रहने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरमा कार्यालय स्थापना गरिने प्रहरी उपरीक्षक नवीराज राईले जानकारी दिनुभयो । एक सातापछि कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ । उक्त कार्यालयले उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक प्रदेशका सबै जिल्ला हेर्ने छ । क्षेत्रगत विभाजन हुँदा यस क्षेत्रको कार्यालय बाराको पथलैयामा रहेको थियो । सो ठाउँ प्रदेश नं २ मा परेपछि प्रदेश नं ३ को ट्राफिक कार्यालय यहाँ राखिएको हो । “मुग्लिनमा कार्यालय राख्ने तय भएपनि भवन अभावका कारण भरतपुरमा सारिएको हो,” प्रहरी उपरीक्षक राईले भने । उक्त कार्यालयमा ३६ जनाको दरबन्दी रहेको छ । चितवन उपत्यकाबाहिर सबैभन्दा बढी सवारी आवागमन हुने क्षेत्र हो । सडक सञ्जाल, राजधानीसँगको निकटता तथा भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर प्रदेश कार्यालय यहाँ राखिएको हो । करेन्ट लागेर मृत्यु भएकालाई पाँच लाख राहत दाङ
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (361)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (322)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (301)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (261)
नेकपामा किन असन्तुष्ट छ माधव नेपाल समूह ? (257)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (223)
हेलिकोप्टरबाट डोजर लगेर सिस्ने हिमालको काखमा सडक बनाइँदै (179)
मेरो आँसु चुकाउन सक्छौँ’ भन्दै भिटेनले दरबारमार्गमा पैसा फालेर गरे ब`बाल,भिडियो अहिले भाइरल (165)
ओखलढुंगामा गुड्दै गरेको जिप माथि ढुं गा खस्यो, ३ जनाको घट’नास्थलमै मृ’त्यु
उफ ! महँगी ,हरेक घरको समस्या ,अवस्य हेर्नुहोस!
खोइ त सरकार नेपालको कानुन?
१७ सय सुरक्षाकर्मी स’ङ्क्र’मित, अवस्था यस्तो !
काठमाडौँ, पोखरासहितका स्थानमा ७ वर्षदेखि नक्कली मह बेच्ने श्रेष्ठ पक्राउ
१.	७ महिने ग’र्भमा छोरा हुर्किरहेको थियो , खुशी देख्न नपाउदै २ प्राण एकै साथ सकिए (102)
२.	नेपालकि रिया मानन्धर विश्वकै उत्कृष्ट, संसारका १३ हजार विद्यार्थीहरुलाई पछिपार्दै राखिन कृतिमान ! (99)
३.	चर्चित अभिनेत्री रायमा बन्द बोराभित्र शरिर दुई टु;;क्रा भएको अवस्थामा मृ;;त भे;;टिइन् (94)
४.	श्रीमान् परदेशमा, श्रीमती नेपालमै पौरख गरेर कमाउँछिन महिनाको ५ लाख भन्दा बढि: हेर्नुहोस (87)
५.	‘‘बिदेशमा बस्ने नेपालीले हुण्डीको प्रयोग गरिदिदा अप्ठ्यारोमा नेपाल सरकार! (83)
६.	भ्वाइस अफ किड्स जितेपछि आफ्नो कोचलाई ढोग्दै जेनिशले भने, यो पैसाले आमाको सम्झनामा स्कुल बनाउछु (83)
७.	कुमार घैंटे समूहका गुण्डा नाइके विकास पुन काठमाडौंबाट पक्राउ (82)
८.	गौतमबुद्ध विमानस्थलको उडान तोकियो, मलेसिया र खाडीका यी देशबाट नियमित उडान हुने ! (80)
© 2022 Sudur Sanchar